Le ncwadi ikhethwe kwethi Izwi Livela Liyinyama kanti futhi yebo ngamazwi oMoya wamabandla. Futhi angukugcwaliswa kwamazwi asencwadini Isambulo athi “Lowo onendlebe, makezwe lokho uMoya akusho emabandleni.” Abandakanya okunye okuqukethwe okunokuthile okuyizinhlobo zamazwi akhulunywa namagama afana nalesi siphrofetho, isambulo sezimfihlakalo, nendlela yokuphila. Kukhona okubikezela ikusasa lombuso, izambulo zezimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha, ukuhlukaniswa kwendalo yomuntu, iziyalo nezexwayiso, ukwehlulela okunzima, amazwi enduduzo asuka enhliziyweni, ukukhuluma ngempilo, ukukhuluma ngokungena, nokunye nokunye. Kafushane nje, lokhu uNkulunkulu anakho, nayikho, nesimo sikaNkulunkulu konke kubonakaliswa emsebenzini Wakhe nasemazwini Akhe. Yebo, uma uNkulunkulu eba yinyama manje, umsebenzi Wakhe ukubonakalisa isimo Sakhe, ikakhulu ngokusola nokwahlulela. Esebenzisa lokhu njengesisekelo, uletha iqiniso kubantu, akhombise ezinye izindlela zokwenza, ngalokhu bese efinyelela kulokhu akuphokophele kokunqoba abantu nokubasindisa esimweni sabo esonakele. Yilokhu okusemsebenzini kaNkulunkulu eNkathini Yombuso. Ingabe uyafisa ukungena enkathini entsha? Ingabe uyafisa ukususa isimo sokonakala esikuwe? Uyafisa ukuthola iqiniso eliphezulu? Uyafisa ukubona ubuso beqiniso beNdodana yomuntu? Uyafisa ukuphila impilo enenjongo? Uyafisa ukupheleliswa nguNkulunkulu? Pho, uzokwamukela kanjani ukubuya kukaJesu?